Gaaffii fi Deebii Ajajaa WBO Zoonii Lixaa-Jaal Marroo Dirribaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGaaffii fi Deebii Ajajaa WBO Zoonii Lixaa-Jaal Marroo Dirribaa
Dubbisanii Seenaaf kaawwachuun dansa!!
Dubbii ajayiba hanga dhumattii dubisi koree geggesitoota abiyi irraa arganne
Gootummaa irraa maayii! Urjicha murataa! Siidaa cichoomina kaayyoo! Bu’uura aantummaa sabaa! Dambalii onnee guutuu! Qabsaa’aa Jaal Marroo/Kumsaa Dirribaa!!!
Guyyaa Haleellaa Xiyyaaraa Begii Irratti boombii roobsan sana ture. Wal ga’ii seena-qabeessa Muummicha Ministeeraa Itoophiyaatiin durfamuun murtoo jabaa tokko dabarsuun kan goolabame ture.
“Loltoota ABO irratti injifannoo barbaadame gonfachuun maaliif dadhabame?” ajandaa wal gahichaa ture.
Qondaalonni Raayyaa Ittisa Biyyaa, hoggansi tika waraanaa fi siivilii akkasumas eksipertoonni duula waraanaa fi tikaa marii sanarratti qooda fudhataniiru.
#Hirmaattonni marichaas kufatii isaaniif sababa kan jedhan nama tokkotti quba isaanii akeekaniiru.
#Namni qubni itti akeekamu kunis duukaa bu’aa kumaatamaa, wabii miliyoonotaa, mataa bowwoo cunqursitootaa kan ta’e, gootaa fi kennaa dhaloota ammaa hogganaa WBO Zoonii Lixa Oromiyaa, Jaal Marroo/Kumsaa Dirribaati.
#Hirmaattota keessaa gariin isaanii miira injifatamuu, gaabbii, jibbiinsa sababa hin qabne jabduun akkasumas aarii hadhooftuu dhiiga isaan tufsiiseen Jaal Marroo irratti jibbinsa yoo kabsan mul’ataniiru.
#Nama kana dhabamsiisuu dha_ ee, lafee dugdaa ABO rukutuuf nama kana dhabamsiisuu qabama yaada jedhuun #murtoo seena-qabeessa ta’e irra gahan.
#Boqonnaan marii iiti aanu akkamitti, hoggansa eenyuutiin, tooftaa waraanaa itti opireeshinichi raawwachuu qabutu eegalame.
#Koreen tokko duula kana milkeessuuf hundeeffame.
#Koreen kunis Muummicha Ministeeraa Abiy Ahmadiin kan durfamu yoo ta’u ogeessa tika waranaa fi siivilii cimaa ta’e kan hammate ture. Opireeshinni Ameerikaan hoggansa Obaamaatiin birkii CIA Convert Action Wage’n Osamaa Bin Laaden irratti taasifames akka fakkeenyaatti fudhatame.
#Itoophiyaatti hojii basaasaa gama bilbila butuun raawwatamutti Dr Abiy kan gitu W/Sillaasee W/Mikaa’el malee kan hin jirre ta’uun isaa muummichi koricha hogganuuf aangoo qofa osoo hin taane dandeettii fi haamilees kan itti qabu isa taasisa.
#Abiy Ahmad bilbila harkaa Jaal Marroo GPS trace or tap taasise.
#Jeneraalli waraana Itoophiyaa tokko bilbila Jaal Marrootti bilbile. “Filannoo lama qabda: harka kennuu yokaan du’uu” jechuun doorsisa, akaakeekkachiisaa fi dhaadannoon guutameen itti dubbata.
#Gootichi onneen guutuu kun akkuma yeroo kaanii sirriitti kolfeet, “rakkoon kan furamu mariin malee doorsisaan miti” jedhee deebisa.
#Jalqabumayyuu kan bilbilame Jaal Marroon harka akka laatuuf carraa kenniufiif osoo hin taane GPS’n adda baasanii iddoo jiru adda baafamee akka rukutamuuf waan ta’eef hennasuma helikoopterri haleellaa boombii eegale.
#Haleellaa boombii kana booddee deebisee bilbileef. Ajjeefamuu Jaal Marroo mirkaneessuuf ture; sagaluma Jaal Marrootu dhagahame.
#Amanuun isaanitti ulfaate. Oppireeshinni muummicha ministeeraatiin hogganamu, tika waraanaa fi siiviliin deeggaramee hogganaa riphee lolaa tokko irratti qaaxxeffate ni fashale.
#Sabaa himaaleen akka ESAT, OBN, OMN fa’aa dibbee injifannoo rukutuuf jecha qophiirra turani. Ermiyaas Laggasee, Siyyum Tashoomee, Addisuu Araggaa, Taayyee Danda’aa hamma Jawaar Mohaammaditti Oromootti boohicha; diinatti immoo oduu gammachuu himuuf sagalee qarataa turan.
#Garuu , hayyichi saayinsii waraanaa fi ogeessa tikaa fiixa irra jiru; fakkeenya dhaloota har’aa kan ta’e gootichi Jaal Marroon bilbila isaa kan biroo irratti divert godhee fayyadamuun opireeshinicha ‘Yaalii Seena-qabeessa’ akka jerhamu taasise.
Marii Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal MARROO waliin taasisne | RSWO
Marii Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal MARROO waliin taasisne | RSWO https://youtu.be/6KYoZMljfF8 RSWO - Onkoloolessa…
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Lakkoofsa Kudha-lammaffaa